Publié par Eugene Heriniaina à 3/30/2016 04:29:00 PM 1 commentaire:
Publié par Eugene Heriniaina à 11/25/2015 12:50:00 AM 53 commentaires:
Nandalo fanafihana ny serveur-n'ny serasera misy ny blaogy.org androany. Tsy tratran'ny fail2ban tsotra fotsiny satria angamba tsy tena miditra ry zalahy fa manao ddos fotsiny. Dia nila nanaovana fail2ban manokana
Toa izao ny endriky ny ataky. Ao anatin'ny 1 segondra misokatra in 5 na in 6 ny site.
namorona fichier hoe wp-auth.conf tao amin'ny /etc/fail2ban/filter.d
Izao no natao tao anatiny
dia avy eo nampiana an'izao tao amin'ny jail.conf
logpath = /var/log/virtualmin/blaogy.org_access_log
Publié par Eugene Heriniaina à 8/01/2015 12:23:00 AM Aucun commentaire:
Tononkalo sy Mpanoratra ankafizina
Fanatsarana kely nisy nangataka ity vita androany ity. Hoy ilay namana:
Tena misy mpanoratra tena mampiaiky ary tiako daholo ny asa sorany rehetra, mba iriko raha misy bokotra azo tsindriana hoe "Ankafiziko" ka haharaisako imailaka avy hatrany mitaona ahy hitsidika ny tononkalo vaovao izay nosoratan'io mpanoratra io.
Koa nanomboka izao dia afaka mankafy mpanoratra sy tononkalo isika ao amin'ny Vetso.serasera.org
Rehefa mijery mpanoratra na tononkalo dia misy sarina fo dia tsindrina iny raha hankafy. Lasa menamena ilay fo rehefa ankafizinao ny tonokalo na mpanoratra.
Raha efa mankafy an'ilay tononkalo na mpanoratra no manindry ilay fo menamena dia miala ao anaty lisitry ny ankafizinao ilay tonokalo na mpanoratra.
Rehefa mankafy mpanoratra ianao dia mahazo filazàna amin'ny alalan'ny email isaka ny misy mampiditra tononkalon'io mpanoratra io. Raha tsy te handray email dia afaka mandeha ao amin'ny lisitry ny mpanoratra ankafizinao dia esorina ilay valopy kely.
Publié par Eugene Heriniaina à 5/21/2015 11:08:00 PM 1 commentaire:
Libellés : vetso
Publié par Eugene Heriniaina à 3/27/2015 11:58:00 AM Aucun commentaire:
Publié par Eugene Heriniaina à 3/14/2015 11:23:00 AM Aucun commentaire:
Publié par Eugene Heriniaina à 3/07/2015 11:40:00 PM Aucun commentaire:
Fihaonana Rome III - 12 - 15 Aout 2011
Publié par Eugene Heriniaina à 8/17/2011 02:55:00 AM 1 commentaire: